Waa sidee xaaladda Cafimaad ee Guddoomiye Yarisow? – Radio Daljir
Xaalada caafimaad ee Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Yariisow ayaa ka soo reyneysa, iyadoo dhaqaatiirta ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in isaga iyo dhaawacyada kale ay soo bogsanayaan marba marka ka dambeysa.
Wasiirka Dhallinyarada iyo Cayaaraha Xuukumadda Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye oo kamid ah Guddiga Heer Qaran ee loo xilsaaray la socoshada Xaaladda dhaawacyada islamarkaana ku sugan Cisbitaalka lagu daweynayo Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa caawa iyadoo la hadleysay Radio Muqdisho waxay ay sheegtay in ay aad uga soo reyneyso xaaladda caafimaadka Duqa Magaalada Muqdisho.
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya Dalka Qadar C/risaaq Faarax Cali Taano oo faahfaahin dheeraad ah sii bixiyay ayaa sheegay in Qeybta Xaaladda Dagdagga ah laga saaray 6 kamid ah bukaanadii la qaaday, haddana Guddoomiyaha Gobalka Banaadir iyo Maxamed Cabdi Maxamuud Gaboose ay ku harsan yihiin Qeybta Xaalaadda Degdegga ah.
Safiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in Guddoomiyaha Dagmada Warta Nabadda oo ka mid aheyd dadka dhaawacyadoodu cuslaayeen loo sameynayo Waji Qurxin, maadaama Meelaha dhaawacyada Cuslus ay kasoo gaareen ay kala ahaayeen Wajira iyo Muruqa Lugta, Xaalkeeduna uu aad u wacanyahay.